Yini i-diastasis yesisu | Bezzia
Yini i-diastasis yesisu
UToñy Torres | | Izifo, Ezempilo
Umzimba womuntu uthola ukuguqulwa kwezinhlobo ezahlukahlukene kuyo yonke impilo. Kwesinye isikhathi, uthola isisindo esikhulu noma ulahlekelwe isisindo esiningi ngokungazelelwe, ngaphandle kwengxenye yangaphakathi inesikhathi sokuzivumelanisa kahle. Siphinde sidlule ezigabeni ezahlukahlukene, njenge ukukhulelwa, okuyinguquko ehlaba umxhwele kakhulu yomzimba wesifazane.
Zonke lezi zinguquko zomzimba ezibonakalayo ezingeni langaphandle, zidala izinkinga ekwakhiweni kwangaphakathi komzimba. Ikakhulukazi emisipheni yesisu, okuyiyona ehlupheka kakhulu lapho inyuka ngosayizi omkhulu ekukhulelweni noma ekutholeni kwesisindo ngokungazelelwe. Uma lokhu kwenzeka, kungenzeka i-diastasis yesisu, inkinga ehlupheka abesifazane abaningi.
1 Yini i-diastasis yesisu?
2 Izimbangela ze-diastasis rectus abdominis
3 Ungazi kanjani ukuthi ngine-diastasis
4 Ukwelashwa kwe-diastasis yesisu
Yini i-diastasis yesisu?
I-diastasis yesisu noma i-diastasis ye-rectus abdominis, iqukethe ukwehlukaniswa kwemisipha yesisu. Izinhlangothi zombili ze-rectum ngokwemvelo zixhunywe ku-linea alba, esukela eshibhini iye e-obligo. Le misipha kufanele ifakwe ukuze umzimba ume mpo. nokuphefumula kahle, phakathi kokunye. Lapho kukhona ukuhlukaniswa kwemisipha ye-rectum, njengokukhulelwa, bahlukana ne-linea alba futhi yilapho kwenzeka khona i-diastasis yesisu.
Izimbangela ze-diastasis rectus abdominis
Noma kunjalo imbangela ejwayelekile ye-diastasis yesisu ukukhulelwa, kunezinye izimo ezingadala le nkinga esiswini.
Ukugugaukuhamba kwesikhathi kunciphisa ukwakheka kwemisipha yomzimba wonke, kuphela ukuthi kwezinye izindawo kuyabonakala kakhulu kunezinye. Kuyo yonke le minyaka, imisipha kanye nemicu eyakha ukwakheka kwesisu yenza buthaka kubangele i-diastasis yesisu.
Ukwanda okungazelelwe kwesisindo: Ukuthola isisindo esiningi ngokushesha kungadala ukuthi izinhlangothi ze-rectum zehlukane ne-linea alba.
Ukukhulelwa: Imbangela ejwayelekile ye-diastasis yesisu ukukhulelwa, empeleni, kwenzeka kubo bonke abesifazane ngalesi sikhathi. Kodwa-ke, kwezinye izimo kune-diastasis ebucayi kakhulu okunzima ukuyithola. Imvamisa ekukhulelweni okuningi, ngemuva kokukhulelwa kaningana noma lapho owesifazane okhulelwe ezuza isisindo esiningi ngesikhathi sokukhulelwa.
Ungazi kanjani ukuthi ngine-diastasis
Into efanelekile kuleli cala ukuthi uye kudokotela wakho ukuze akwazi ukuhlola. I-Diastasis ingaba ngamazinga ahlukahlukene, futhi kuya ngecala lakho elithile, kuzodingeka ukuthi uhlolwe ngaphakathi isisu sakho silimele kangakanani. Kodwa-ke, kunezici ezithile ezijwayelekile ezingakusiza ukunquma ukuthi ungaba ne-diastasis yesisu.
Ngemuva kokubeletha, isisu sakho sisazizwa sivuvukileSengathi usenengane ngaphakathi Lokhu kujwayelekile ezinsukwini ezimbalwa zokuqala, kodwa kancane kancane isisu kufanele sibuyele endaweni yaso.
Unamagesi, kubiza wena kakhulu ukugaya noma uqaphela isisu esivuvukile.
Iphansi le-pelvic elinciphile, okubangela ukungahambi kahle komchamo kumazinga ahlukahlukene.
Ubuhlungu emhlane ongezansi.
Ukungakhululeki lapho unobudlelwano ezocansi.
Ukwelashwa kwe-diastasis yesisu
Ukwelashwa kwe-diastasis yesisu kudlula ezigabeni ezahlukahlukene, njalo kucatshangelwa ukuqina kokulimala esimweni ngasinye. Kukhona izindlela zokwelashwa ezingathuthukisa ukulimala okuncane, kanye nokuzivocavoca okuthile okufana nama-hypopressives. Kunoma ikuphi, kubaluleke kakhulu ukuthola izeluleko zochwepheshe ukusisiza senze ukuzivocavoca umzimba okwanele ukugwema okunye ukulimala.
Ngisho nasezimweni ezibucayi kakhulu kuyadingeka ukuthi uphendukele ekuhlinzeni ukuxazulula ukulimala esiswini. Lokhu kwenzeka lapho ukuhlukaniswa kwe-recti kuphezulu kakhulu, lapho kukhona isikhumba esiningi ngokweqile esiswini, uma kuvela i-hernias ezingasuswa ngokuphelele noma lapho kukhona umonakalo omkhulu kakhulu odongeni lwesisu. Lokhu kunganqunywa ngungoti kuphela, ngakho-ke kubalulekile ukuya ekubonisaneni nabezempilo ngokushesha okukhulu.
Ezimweni eziningi akunakwenzeka ukugwema i-diastasis yesisu, yize ungasithuthukisa isimo sakho somzimba futhi unciphise namathuba okulimala kanzima. Gcina umzimba wakho usesimweni, zijwayeze ukuzivocavoca umzimba noma ngabe ukhulelwe futhi ubheke isisindo sakho. Le yindlela engcono yokugwema ukukhuluphala ngokweqile nokululama ngempumelelo ngemuva kokukhulelwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ezempilo » Yini i-diastasis yesisu
Ama-dungaree, uyabathanda noma uyabazonda
Iqoqo leDolce Diva likaKiko Milano kuleli hlobo